Ukuthengiswa Okufushane - Izakhiwo Nezindlu zeNW & NY, i-Selectate, Ukudalulwa Kwezemboni kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / Yamadivayisi iDemo
I-Short Sale Negotiation ingxoxo phakathi kwezinhlangano ezimbili noma ngaphezulu ngenhloso yokuthola umphumela onenzuzo lapho umuntu obolekayo engaphansi kwamanzi embolekweni yakhe futhi angathanda ukugwema ukubonwa. Izikhathi eziningi sinamakhasimende athi afuna ukuthengiswa okufushane, kepha empeleni alingana ngokulinganayo empahleni yawo. Sivame ukuchaza isimo sabo bese sibaqondisela kumthengisi wezezakhiwo ukuze benze uhlu olujwayelekile. Sizosebenzisana nomthengisi ke uma bedinga usizo ngokuvala, noma sibathole isikhathi esithe xaxa sokuvala uma ibhange lifuna ukubikezela kusakhiwo sabo.
Kodwa-ke, lapho ukuthengiswa okufushane kuyindlela kuphela njengoba iklayenti lingathanda ukugwema ukubekwa phambili kwirekhodi labo, inkinga enkulu ngezingxoxo zokuthengisa okufushane yilapho i-ejenti yohlu ingazi ukuthi benzani. Uma umenzeli wokufaka kuhlu engenzi izinto futhi ephuthelwa ngamanani okuhlala ekhaya, ikhaya kungenzeka ukuthi lithole abathengi abafanayo noma intengo izokwehla kakhulu ukuthi ibhange lingase lithathe amathuba abo neSheriff Sale.
Beka isikhathi sakho sokuthola iqembu elivelayo elifanele uma ufuna ama-perfohttps: //www.youtube.com/watch? V = t8uItoC8f34rm ukuthengiswa okufushane. Sincoma i-First Look Realty nganoma yikuphi ukuthengiswa ukuthi ngabe kukhona ukuthengiswa okuvamile noma okufushane.